बोरिक एसिड - एक दवादारू भइरहेको जीवाणुरोधी गतिविधि, लामो समय को लागि चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ। कारण पानी मा राम्रो विलेयता, घुलनशीलता गर्न, यो धेरै राम्रो तरिकाले छाला मा penetrates। बोरिक एसिड एक मलम वा समाधान रूपमा topically मात्र प्रयोग गरिएको छ।
बोरिक एसिड conjunctivitis र dermatitis अघि धेरै रोगहरूबाट, मुखासे र otitis देखि को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ। हो, साथै यो उपकरण एकदम सस्तो छ, र देखिने परिणाम दिन्छ। यो सबै यी रोगहरु को घर उपचार मा अपरिहार्य बनाएको छ।
यो उपकरण प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। तपाईं मुखासे यातना भने, यो, एक कपास बल लिन यो एसिड भिजेको र दुई पटक एक दिन भन्दा कुनै अनुहार हटाउन पर्याप्त छ। यो रोग धेरै चलिरहेको छैन भने सकारात्मक नतिजा, हासिल गर्न सकिन्छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा बोरिक एसिड छैन मदत गर्नेछ र थप शक्तिशाली लागूपदार्थ आवश्यक हुनेछ। संग संरचना मा salicylic एसिड र chloramphenicol बोरिक एसिड अक्सर बस मुखासे लड्न अभिप्रेरित र प्रभावित छाला मा प्रभाव को एक उच्च डिग्री छ छ जो मैश, मा समावेश गरिएको छ।
वयस्क मा बोरिक एसिड को चिकित्सा संस्थाहरु को आधुनिक कर्मचारीहरु मात्र एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने रूपमा नियुक्त। छोराछोरीको उपचार मा यो एजेन्ट को लामो समयसम्म प्रयोग विषाक्तता निम्त्याउँछ भन्ने शरीर मा हानिकारक पदार्थ को संग्रह गर्न जान्छ।
conjunctivitis जस्ता आँखा रोग संग, आँखाले धोए थियो बोरिक एसिड, दुई प्रतिशत जलीय समाधान गर्ने सल्लाह दिन्छन्।
बोरिक एसिड तीन-प्रतिशत जलीय समाधान तीव्र र क्रोनिक उपचार बीचमा कान (otitis मिडिया) को सुनिंनु। यो समाधान गर्न प्रभावित कान वा gauze विशेष बन्डलहरूको संग moistened मा डाले र कान नहर तिनीहरूलाई प्रविष्ट थियो। तर धेरै अझै पनि यो स्वास्थ्य को लागि हानिकारक छ कि छैन भनेर, छैन यो बोरिक एसिड को कान मा ड्रिप गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर आश्चर्य? कान अलिकति खुसीले गदगद समाधान ड्रिप राम्रो छ। यसको एकाग्रता 0.5 3% हुन सक्छ। एउटै एकाग्रता को एक समाधान नम भडकाऊ प्रक्रिया उत्पन्न छाला मा एक लोशन, जब रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
chafing र दबाव sores को उपस्थिति मा, योनी mucosa र cervix उत्तेजना को रिसले छाला चिकनाना गर्न आवश्यक छ जो 10 प्रतिशत एकाग्रता Glycerol को समाधान, मदत गर्नेछ।
पुरातन समयका भएकोले टाउको जुम्रा उपचार गर्न प्रयोग बोरिक मलम 5-प्रतिशत एकाग्रता। यसको लागि प्रयोग गरिन्छ otitis मिडिया, को उपचार conjunctivitis, vaginitis, एक्जिमा र डायपर दाना। यसबाहेक, बोरिक मलम - बाह्य उपकरण। किनभने, तिनीहरूको आधारभूत घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने गुण बाहेक, अझै पनि insecticidal गतिविधि छ यो एक चिकित्सकको निर्धारण बिना प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ जसमा साइड इफेक्ट को घटना को सम्भावना।
जब कान मा डाले अधिमात्रा वा लामो समयसम्म प्रयोग, जस्तै, को मामला मा निरन्तर एक पक्ष-प्रभाव यसको औषधीय विशेषताहरु वाहेक, र बोरिक एसिड मा छ। यस मामला मा दबाइ विषाक्तता नेतृत्व कि शरीर मा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाकवाकी, उल्टी, टाउको दुखाइ, र छाला मा विभिन्न rashes रूपमा वयस्क मा नै प्रकट, तर छोराछोरीको ऐंठन र आघात को पनि एक राज्य हुन सक्छ।
Contraindicated बोरिक एसिड को प्रयोग मानव शरीर सतह को ठूलो क्षेत्रहरु भन्दा कुनै पनि एकाग्रता र nanodiamonds उपयोग गरदै।
प्रायजसो मा, बोरिक एसिड देखि 0.5 5% एकाग्रता, 10% को एक एकाग्रता मा Glycerol समाधान,5प्रतिशत बोरिक लेप, liniment बोरोनकोअर्थ-जस्ता (यो छाला सुनिंनु को लागि एक सुकेको एजेन्ट रूपमा प्रयोग गरिन्छ) को रक्सी पिउने समाधान मा उत्पादन। बोरिक एसिड जस्ता तयारी मा समावेश गरिएको छ Teymurova पेस्ट salidolovaya लेप, बोरिक-जस्ता-NAFTALAN पेस्ट।
यो एसिड एक विषाक्त पदार्थ हो। त्यसैले, खराब नतिजा जोगिन, यो एक डाक्टर लागू हुनुपर्छ।
उपचार जौ हाउस प्रदान कसरी गर्ने?
परीक्षा गर्भावस्था अघि - एक स्वस्थ बच्चा गर्न प्रमुख छ
गुदा fissure कस्तो व्यवहार गर्ने? बच्चाहरु र वयस्क मा गुदा मा चर्किएको को उपचार
Novinet: साइड इफेक्ट र व्यावहारिक संभावनाहरु
स्पाइनल एनेस्थेसिया - शल्य चिकित्साको समयमा आदर्श एनेस्थेसिया
होटल Cornelia2* (Ayia नापा, साइप्रस): समीक्षा
उज्ज्वल गर्मी र शरद ऋतु 2013: सधैं एक प्रवृत्ति हुन रूपमा
खाद्य विषाक्तता - लक्षण र उपचार
Niva 21214: प्राविधिक विनिर्देशों, मूल्य, फोटो
Underbody उपचार: समीक्षा, मूल्यहरु। आफ्नो हातले तल कार संसाधन